Dowladda Soomaaliya oo dhaqan galineysa xeerarka la dagaalanka musuq-maasuqa. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo dhaqan galineysa xeerarka la dagaalanka musuq-maasuqa.
Dowladda Soomaaliya oo dhaqan galineysa xeerarka la dagaalanka musuq-maasuqa.
Wasaaradda cadaaladda XFS ayaa Muqdisho ka furtay wadatashi ku aaddan dib ugu biirista hiishiiska caalamiga ah ee la dagaalanka musuq-maasuqa.
Previous articleSoomaaliya oo Caalamka la wadaagtay saamaynta dhaqaale ee uu gaarsiiyey Coronavirus.
Next articleXeer-ilaaliye gaar ah oo loo magacaabay baarista dilalka wariyaasha iyo tacadiyada loo gaystay.